"Ndiyodwa!" Intombazana enhle, egqoke kakuhle ikwazi ukufumana yonke into okanye umntu. Ukhangelelwano olulodwa lubangela ukuba abe neentloni, kwaye xa ehlekisayo, kubonakala ngathi ilanga liyiphendula ngokumomotheka, likhangele emva kwelifu, ilizwi lakhe lifana nokubetha kweentsimbi. Unomntu, kwaye akayena mnye, unentombi, kwaye akukho nanye, unomntu onokuthetha naye, kodwa yena yedwa. Kwaye umbuzo uvela: njani intombazana enjalo inokuba yedwa? Amagama amabini abonakalisa kwaye akhulume ngomntu ngokungathi kubonakala ngathi. Bakhombisa umphefumlo wonke womntu, kuphela kufuneka uqonde intsingiselo yale binzana. Bonke abantu baya kwinqanaba elilodwa, okanye mhlawumbi kungenxa yokuba ubunyulu buvela kumuntu kumntu , njengomkhuhlane okanye intsholongwane? Kuloo meko, ngaba kukho unyango lonwabo? Okanye u lonwabo ngumntu ongapheliyo?
Uxhala luyintlalo yoluntu kunye neengqondo kuluntu apho kungekho namnye wethu okhuselekayo, lo luhlobo lwengqondo lomntu. Ukulondeka kungabikho okulungileyo kunye nokungalunganga. Ukuzihlaziya kunesizungu, apho umntu eziva ekhululekile ukuzishiya yena kunye neengcamango zakhe zodwa. U-Aristotle ocinga kakhulu kunye nohlakaniphileyo wathi "othanda ukuhlala yedwa, nokuba yinkomo okanye uThixo." Ndiyoliswa yedwa, kodwa andiziboni njengerhamncwa, nangona kunjalo uThixo. Wonke umntu unokufumana umtsalane ngedwa, oya kuphumla kwiingxoxo zabantu, kwaye ahlale kunye nengcamango yakhe yedwa, ukuqonda yena kunye neminqweno yakhe. Ukuziqhelanisa kukubonakalisa ukungabikho komntu onesizungu, apho umntu engenawo abantu abasondeleyo kuye kunye nemvakalelo emihle.
Ubunono buqhelekileyo kwiidolophu ezinkulu, apho abantu banxibelelana ngokungafaniyo, njengokuthi "siyabonga, unjani?" Nento yonke, ukunxibelelana kuyayeka, kwaye umbuzo othi "wenza ntoni na?" Kucelwa nje ukuba kubekho into ekuthethwa kuyo kwintlanganiso, kungekhona nje cwaka. Kwi-movie "Mzalwana 2", xa uBodrov efika eMelika aze ahlangabezane nehenyukazi yaseRussia apho, uthi eMelika wonk 'ubani ubuza "unjani", kodwa ngokwenene akukho mntu uyakhathalela wena kunye nemicimbi yakho. Ngokomgaqo, ndingatsho ukuba eRussia into efanayo, wonke umntu ubuza umbuzo othi "wenza ntoni na?", Nangona bengenandaba neempendulo kwaye abanandaba.
Kwaye ke, ukuseka ithemba kunye nobuhlobo, asisoloko sanele ixesha elaneleyo, sisebenza kuphela ngegama elithi "siyabonga, unjani?". Ukukhawuleza kwintlambo yabantu, silahla eli binzana kumntu esidibana naye kule ndawo, kwaye adlule ngokukhawuleza ukuba loo mntu akanalo ixesha lokubuza umbuzo ofanayo, kungekhona ukuba uphendule lo mbuzo.
Ngaba kunokwenzeka ukumisa nokumisa lo mntu, kwaye uthi "nkosi, unjani? Masihlangane namhlanje ebusuku, kwaye uya kundixelela yonke into efana nawe, apho ukhona, siya kuthetha, masithethe. " Kwaye wadibana nalo mntu, mhlawumbi unokwenza umsebenzi olungileyo ngokuzalisa ulwalamane lwakhe, okanye mhlawumbi uya kukunceda ulahlekelwe yedwa. Saye nini na? Siziqhubela kwikhonkco kwaye sihlala sisese, sinyanzelisa abanye ukuba bafana. Mhlawumbi kufuneka siqale ngabanye, ngubani oya kuqala ukucinga ngathi?
Ukulondeka xa ufuna ukuqonda nokuva. Uzama ukuthetha into kwaye, uqaphela ukuba awuphulaphuli, uyeka ukuthetha, qala ukukhangela umntu okuqonda ngaphandle kwamagama. Uxelelwe into ethile, kodwa awuyiva, kuba uxakeke ngeengxaki zakho kwaye uxhalabele ukuba awunakuvakala. Umntu ofanayo uxakeke naye othetha naye ngaye. Khawucinge, ihlabathi lonke lihlala ngabantu abanjalo abathethayo, nabangayiva. Wonke umntu uthi, kodwa abavakalayo, kuba bona ngokwayo bathi, kodwa abayiva. Kwaye ke, lonke ihlabathi liqukwa ngexesha elifanayo, kodwa lingaziphulaphuli abantu abancinci.
Emva koko, bonke abantu bayazi ukuba banesizungu, nangona kukho umntu ofuphi. Makube ngumhlobo okanye umama, okanye umzalwana okanye umhlobo, akubalulekanga. Ukuba kukho izithuba ezingenanto emphefumlweni wakho, kwaye de uze ugcwalise le mpahla ngento ethile, uya kuziva uwedwa. Emva koko, ngexesha lethu umntu osekhulile ufumanisa kunzima ukufumana ulwimi oluqhelekileyo kwisizukulwana esincinane, kuba iimfuno zexesha elidlulileyo azihambisani neemfuno zeli xesha. Okanye mhlawumbi kunzima ukuba umntu athole ulwimi oluqhelekileyo nabantu abakujikelezile. Okanye umntu unento ephantsi yokuzithemba, yingakho esaba ukuthetha nabantu. Ebomini kukho konke, akunakwenzeka. Kwaye iisoloko ihlala ixinzeleleke.
Ukuzixhalabisa kunokucaca ngokucacileyo. Ubungqina bolu lonwabo lubonakaliswa ngokungabikho koluntu unxibelelwano, xa umntu enomnqweno wokunxibelelana nabantu, kodwa akanalo ithuba. Ngokugqithiseleyo, yinto eqhelekileyo xa umntu ejikelezwe ngonxibelelwano, kodwa ngelo xesha uvakalelwa yedwa, kuba aba bantu bathetha nto kuye kwaye banokutshintshwa kalula ngabanye. Ukuba nesizungu esinjalo kubangelwa kukuba umntu ukholelwa ukuba akukho mntu uyakwazi ukuyiqonda, kwaye akukho mntu onjalo oqonda intsingiselo yabo, kwaye bakholelwa ukuba ukuba akukho mnye ohambelana nawo, ngoko ngokubanzi, kutheni kufuneka. Ngaloo ndlela, umntu uyazigweba ukuba unesizungu, kwaye kunzima ukubonakalisa ukuba yedwa, kuba abantu abahluphekileyo kulolu hlobo baziphatha ngokwemvelo.
Ukulondeka kuyisicatshulwa ngamnye wethu, wonke umntu ufuna ukubonisa ukuba abodwa, kodwa emphefumlweni, ngokwenene, sonke sodwa kwedwa. Njengoko uyazi, ndifuna ukunikezela eli nqaku ukuba ndibe nesizungu! Ukulondeka kungathi sihlobo lwethu bonke, asiyi kuze asishiye kwaye akasayi kusishiya, uhlale ekulungele ukuthatha umntu osondeleyo kwaye othandekayo, ulungele ukwandisa isandla sakhe sokuncedisa okanye ubeke endaweni yakhe ihlombe, kuphela ukudibana naye kunzima kakhulu kuthi kwaye kubi. Ikhupha kuthi zonke izinto ezintle ezikhoyo kuthi, zibuyisele ngokubuyisela kwaye zichukumise iingcamango malunga nexesha elidlulileyo, elikhoyo kunye nekamva.
Kodwa ngamanye amaxesha kuya kuba mnandi ukusuka ebomini, abahlobo, izalamane, kwaye uvalelwe kwindlu yakhe, ndifuna ukungena kuyo-ndodwa. Ngezinye izikhathi uluncedo lunika kwaye luncedo, kunye nalo unokuqonda iingcamango zobomi bakho, cinga ngeengcamango, okanye ujabulele inkampani yakhe, elele ekuhlambuleni kunye ne-foam, okanye ukufunda incwadi. Uxhala luyakwenza ube yinkampani ebalulekileyo. Ndiyathanda ukunqabisa, ndiyakuvuyela, nangona ngamanye amaxesha ukuthula kuqala ukucaphukisa ngaphantsi kwesandi esikhulu. Nokuba uvula umculo ukuya kupheleleyo, okanye i-TV, uya kuphulaphula ilizwi le lonwabo, kuba nguwe, ilizwi lakhe - zezi zizathu zakho ezizulazula entloko yakho kwaye ungayeki ukuphindaphinda "Ndiye ndedwa" kwaye akukho phuhliso izixhobo ongeke uzilahle. Njenganoma yimuphi umhlobo okanye intombi, ihlala ikhupha kwaye ifuna ukumthumela endaweni ethile kude kwaye iqhubekele kwiingalo zabahlobo bokwenene, kwaye kungekhona kwimeko yokomoya.
Xa ndiyichukumise umxholo wedwa, ndacinga, kwaye indlela abaculi ababonisa ngayo iilesi? Ukuba iibongozi nabalobi bangabonisa iimvakalelo zabo ngamazwi atyunjwe kwizivakalisi, ngoko abaculi benza njani? Kwaye ke nda khumbula i "square square" edumileyo yaseKazzimir Malevich, mhlawumbi wazenza yedwa? Emva kwakho konke, u lonwabo alupende ngeemibala ekhanyayo. Ukulondeka kuyinto ephazamisayo, isondeza ngobomi obuphantsi kunye nokudweba kwimbala emnyama. Mhlawumbi, uKazimir Malevich uzame ukutyhila "isikrasi sakhe esimnyama" ngomzobo wakhe, ukuba yedwa?
Ukuxazulula ingxaki yokulondeka akulula, okokuqala kufuneka ufumane ukuba ngubani onganeleyo ukuthetha naye, okanye ngubani osilahlekileyo, kwaye xa, emva kokugqiba konke oku kwaye sinokumisela, kufuneka sizimisele ukukhangela, kodwa akusoloko kulula ukuzimisela , ngubani kunye nokungasweleki. Umntu uyisidalwa esinjalo kangangokuba ngamanye amaxesha akwazi oko akufunayo ukuze abe nolonwabo olupheleleyo. Kwaye ukufumana nzima kunzima.
Funda kuyo yonke into ukuba ujabule, ufunde ukuguqula yonke into ecaleni lakho, ube ngecala elihle kuwe. Ukuxilwa akuyona into eyona nto ingenzeka. Ubunzima, kwaye ngoko kuyimfuneko kuthi. Uxolongo kuthi, inxalenye yethu, kwaye sizama ukuyilahla, kufana nokulahla inxalenye yakho. Kuloo mntu le nxalenye ikhona, kwaye kumntu omncinane kakhulu. Ukulondeka kuyinto engapheliyo, asiyi kuze sikulahle, kodwa kufuneka sifeze ukugcinwa kweso sixhobo sonke ixesha, ukuze singabi nakuzo.
Ukungavumelani - kunzima ukusilahlela, ukuyeka ukuyeka - ayiboni, kakuhle, isilumko-uyonwabela.
Indlela yokuthanda umzimba wakho, ube mnandi kwaye unomdla
Iindlela zokunyamekelwa kweenwele zeenwele
Ikhusi kunye nokunakekelwa kwe-decollete: iinkqubo ze-cosmetology
Iifatata ezifihliweyo kunye nompu
Ukukhetha iingubo zesimo somxholongwane
Umatshini, ukuthandana nabantu abacebileyo
I-Cinnamon kunye nobusi ngokulahleka kwesisindo: iiresi zokutya
I-potato isobho ecocekileyo
Yintoni i-orgasm yamadoda nabasetyhini?
BALSAMELLA i-sauce yaseTaliyane emhlophe